Akhriso:- Saddexda Qodob Ee Fududeeyey In Madaxawayne Farmaajo Iyo Raysal Wasaare Rooble Ay Heshiiyaan – Borama News Network
Akhriso:- Saddexda Qodob Ee Fududeeyey In Madaxawayne Farmaajo Iyo Raysal Wasaare Rooble Ay Heshiiyaan
Qodobo dhowr ah ayaa loo arkaa in ay fududeeyeen in madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisal wasaare Rooble ay ka heshiiyaan khilaaf muddo laba bilood ku dhaw ka dhexeeyay oo ay ugu weynayd arrinta hay’adaha Amniga oo masuuliyiin kala duwan loo kala magacaabay.
Hoggaanka NISA iy wasaaradda arrimaha dibedda ayaa ahaa xudunta uu khilaafku ka billowday, ka dib markii Ra’iisal wasaare Rooble uu amar ku bixiyey in hoggaanka hay’addaas uu waqti kooban ku soo gudbiyo faahfaahin la xiriirta kiiska gabadhii nabadsugidda ka tirsanay ee Ikraan Tahliil oo dhammaadkii bishii June la waayey.
Intaas ka dib ra’iisal wasaaraha ayaa sheegay in uu xilkii ka qaaday agaasimaha Nabadsugidda, Fahad Yasin. Ra’iisal wasaaraha ayaa dhanka kale, Bahiir Maxamed Jaamac (Goobe) u magacaabay taliyaha cusub ee hay’adda nabad sugidda, tallaabadaas oo madaxtooyadu ay ka hor timid.
Wixii intaas ka dambeeyey, madaxweyne Farmaajo ayaa soo saaray wareegto uu ku sheegay in uu dhimay awoodihii ra’iisal wasaaraha oo uusan cidna magacaabi karin isla markaasna uusan qofna xilka ka qaadi Karin.
Lafta gareen oo ka hadlayey heshiiskan ayaa yiri “Waxaa ilaahay mahaddiis ah in ay soo dhammaatay kala aragti duwanaantii muddada bisha iyo waxa la jira socotay ee ku saabsanayd hay’adda nabad sugidda iyo hay’adaha amniga.”
Wuxuu intaas raaciyey in “dadaal dheer ka dib” ay si wanaagsan oo kalsooni leh uu khilaafkii u soo gabogaboobay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa oggolaaday in Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ra’iisal wasaare Rooble uu horay u magacaabay uu ahaado wasiirka amniga arrintaas oo madaxtooyadu ay horay u diidday.
Waxaa sidoo kale lagu heshiiyay in Bashiir Goobe oo horay ra’iisal wasaaruhu ugu magacaabay taliyaha nabadsugidda loo magacaabi doono wasiiru dowle.
Ra’iisal wasaaraha ayaa taasi badelkeeda oggolaaday in Yasiin Faray oo madaxweyne Farmaajo uu u magacaabay sii haya taliyaha nabad sugidda uu sii ahaado taliyaha ku meel gaarka ah ee hay’adda NISA inta madaxweynuhu uu soo magacaabayo taliye cusub.
Kiiska gabadha la waayey ee Ikraan Tahliil yaa la isla qaatay in looga dambeeyo hay’adaha garsoorka oo sidaasna caddaalad loogu raadiyo.
Madaxweynaha dalka Uganda, Yoweri Museveni, oo ciidamo badan ay Soomaaliya ka joogaan ayaa “ku hanjabay” in ciidmadiisa uu kala bixi doono dalka haddii aysan madaxda Soomaalidu khilaafkooda xallin.
Wuxuu sidoo kale Muqdisho u diray taliyaha ciidamada dalka Uganda, Gen Muhoozi Kainerugaba, oo madaxweynaha iyo ra’iisal wasaaraha midba gaarkiisa ula kulmay.
” Sababta keentay in ay heshiiyaan waxaa keenay cadaadis badan oo laba dhinac ka socday, mid waqtigu keenya iyo cadaadis kale oo bannaanka ka imaanaya sida Maraykanka, waddamo kale, iyo ururro waaweyn oo cadaadis ku saaray in khilaafka la soo afjar” ayuu yiri Maxamed Cabdi Cumar.
Doorashada ayaa ah caqabadda ugu weyn ee culayska ugu badan ku haysa madaxda Soomaaliya. Doorashada madaxweynaha ayaa horay loo muddeeyey in ay dhacdo 10-ka bishaan aynu ku jirno ee October, waxaana dadka wax falanqeeyay ay dib u dhacaaan u aanaynayaan khilaafka bannaanka u soo baxay ee madaxda sare.
” Xisbiga Kulmiye Waa Bilaa Dhiig, Maxamed Kaahina Maaha In Maanta Lagaga Siibto” Haweenay Ka Tirsan Xisbiga UCID.
Kulankii Wasiirada Gaashaandhiga Nato Oo Fashilmay Iyo Sobobaha Keenay Fashilkaaso
Gudoomiyaha Golaha Guurtiada Somaliland Oo Beeniyay Warar Sheegayay In Uu Iscasilayo
Bnnstaff Bnnstaff July 3, 2021
“Sheekh Aadan Siiro Waa Samafale Ee Maahan Nin Xoolaha Umada Loo Xado ” Xisbiga Wadani
Bnnstaff Bnnstaff November 30, 2020
Maayirka Burco Oo Wacad Ku Maray In Uu Gacan Adag Wax Kaga Qaban Doono Hoteelo Lagu Caweeyo